တစ္ပူေပၚ အပူေပါင္းမ်ားစြာထပ္ဆင့္သြားတဲ့ ေျမာက္ဒဂုံကဘဏ္ကို ဓါးျပတိုက္မႈ - Update New
February 14, 2020 Update New ျပည္တြင္းသတင္း 0
တစ်ပူပေါ် အပူပေါင်းများစွာထပ်ဆင့်သွားတဲ့ မြောက်ဒဂုံကဘဏ်ကို ဓါးပြတိုက်မှု
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ဒဂုံမြောက်ပိုင်းမြို့နယ် (၃၅) ရပ်ကွက် ငွေပုလဲလမ်းနှင့် လောပိတလမ်းထောင့် ပင်လုံလမ်းနှင့် အဏ္ဏဝါလမ်းထောင့်က CB Bank ကိုပြီးခဲ့တဲ့ ဖေဖဝါရီလ (၇) ရက်နေ့မနက်ပိုင်း ပုံမှန်ဘဏ်ဖွင့်ပြီးမကြာခင်မှာဘဲ လူစိမ်းတစ်ဦးရောက်လာပြီး ဘဏ်ဝန်ထမ်းတွေကို သေနတ်ပြခြိမ်းခြောက်ကာ ဗုံးလို့ယူဆရတဲ့အရာဝတ္တု ( ၂ ) ခု ကိုလည်းကောင်တာပေါ်တင်ကာ ခပ်တည်တည်ဘဲ
ငွေစက္ကူ ၁၀၀၀၀/ိတန် ငွေထုပ် ၆ ထုပ် ( သိန်းပေါင်း ၆၀၀ ) ကိုလုယူသွားတဲ့လုပ်ရပ်က ရုပ်ရှင်ဆန်တယ်လို့ဘဲပြောရမလား ? ပညာဆန်တယ်လို့ဘဲပြောရမလား ?
ထိုင်းကဖြစ်စဉ်တွေကို အတုယူပြီးလက်ရဲဇက်ရဲ လုပ်လေသလား ဆိုပြီးတွေးမိပါတယ်..ဘဏ်ထဲဝင်ပြီးဓါးမြတိုက်ရဲတဲ့ သတ္တိကတော်ယုံသတ္တိမဟုတ်သလို တော်ယုံအခက်အခဲမဟုတ်လို့ ဒီလိုလုပ်ရဲတာလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်..
ရုတ်တရက်ဆိုတော့ဘဏ်ဝန်ထမ်းတွေခင်မြာကြောက်လန့်ကြမှာဘဲလေ ၊ ဒီနေရာမှာအတွေ့အကြုံရင့်ကျက်တဲ့ လုံခြုံရေးဝန်ထမ်း ( သို့ ) လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့ဝင်ဟောင်းတစ်ဦးဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ ဗုံးအတုလား ? အစစ်လား ? ၊ လက်နက်အတုလား ? အစစ်လား ? ခွဲခြားသိနိုင်လျှင်တော့ ဆုံဖြတ်ကတစ်မျိုးဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ်..ထိုင်းက ဘဏ်လုံခြုံရေးဝန်ထမ်းတွေလို လက်နက်ကိုင်ဆောင်ခွင့်နဲ့ ပစ်ခွင့်ပေးထားရင်တော့ သူပစ်ကိုယ်ပစ်ပေါ့..ဗျာ
အခက်အခဲဆိုတာလူတိုင်းမှာရှိကြပါတယ်. ၊ကြွေးမြီဆိုတာလည်း လူတန်းစားအလွှာအသီးသီးမှာရှိကြပါတယ် ၊ တစ်ချို့သူဌေးကြီးတွေ လုပ်ငန်းရှင်ကြီးတွေဆိုရင် လူတွေမသိမြင်နိုင်တဲ့နောက်ကွယ်အကြွေးတွေဟာ ဒေါ်လာသန်းနဲ့ချီပြီးရှိကြပါတယ်.ဘဏ်တွေကနေချေးပြီးသုံးစွဲနေကြတဲ့ ဟန်မပျက်သူဌေးကြီးတွေလဲ ရှိကြပါတယ်..
​နေအိမ်တွင်နောက်ထပ် ဗုံးအတုအသုံးပြုလုပ်ရာတွင် အသုံးပြုခဲ့သည့် ကော်ပိုက်များ ၊ တိပ်ခွေများ ၊ သံဖြတ်လွှပါအပါ သိန်း ၆၀၀ အနက်မှ ကျပ်ငွေသိန်းပေါင်း ( ၃၇၀ ) ကျပ် ၊ အမေရိကန်ဒေါ်လာ ( ၇၀၀ ) နှင့်အတူလုယက်ကျူးလွန်ရာတွင် အသုံးပြုခဲ့သော Probox အဖြူရောင် 5K- 2831 အဖြူရောင်ယာဉ်ကိုလည်း သိမ်းဆည်းရမိ ခဲ့ပါတယ် ။
ဒီငွေတွေကိုလည်းသက်ဆိုင်ရာက သက်သေခံအဖြစ် လိုက်လံသိမ်းဆည်းသွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက် တစ်ပူပေါ် အပူပေါင်းများစွာထပ်ဆင့်သွားပါတယ်..နောက်ဆုံးတော့ တရားဥပဒေအရ ဒဂုံမြို့နယ်ရဲစခန်းကနေ ပ-၃၂၈/ ၂၀၂၀ ရာဇသတ်ကြီး ပုဒ်မ-၃၉၂ နဲ့အမှုဖွင့်အရေးယူထားလိုက်ပါပြီ…
ကြားထဲကမဆိုင်တဲ့သူတွေ ၊ ယာဉ်နံပါတ်အတုတပ်ဆင်းထားလို့ ယာဉ်ပိုင်ရှင်အစစ်က နေရင်းထိုင်ရင်း ခေါ်ယူစစ်ဆေးခံလိုက်ရပါတယ် ၊ ဘဏ်တွေအနေနဲ့လည်း Security တွေမြှင့်နိုင်ဘို့ Push Alarm System / Fire Alarm System တွေအကောင်းဆုံး ရှိရပါတော့မယ်..အခြားနိုင်ငံမှာတော့ ဘဏ်လုံခြုံရေးဝန်ထမ်းတွေအနေနဲ့ ဘဏ်ဧရိယာအတွင်း ပစ္စတိုသေနတ်ကိုင်ဆောင်ခွင့်ပေးထားသလို
ယခုလိုဖြစ်စဉ်မျိုးနဲ့ရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့လာပါက ပစ်ခတ်ဟန့်တား ဖမ်းဆီးနိုင်ခွင့်ရှိသလို မတော်တဆ ချော်ကာနဖူးမှန်ပြီးသေသွားလည်း အပြစ်မရှိဘူးလို့လေ့လာသိရှိရပါတယ်..ဘဏ်ပြင်ပကိုတော့ သေနတ်ယူဆောင်ခွင့်မရှိကြပါဘူး..
ဘာဘဲပြောပြောပါဗျာဘဏ်ဓါးပြတိုက်မှုကြီးကို ၅ ရက်အတွင်းအမြန်ဆုံး ဖော်ထုတ် ဖမ်းဆီးပေးနိုင်ကြတဲ့မြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့မှ တာဝန်ရှိသူအသီးသီးနဲ့ တာဝန်သိပြည်သူများကိုလေးစားဂုဏ်ယူမိပါကြောင်း…